फोेटो Archives - Page2of4-
चलचित्र फ्लप हुदै गएपनि निर्देशक, निर्माताको आँखामा किन परिन् केकी
काठमाडौं । नायिका केकी अधिकारीको चलचित्र यात्रा स्वर बाट प्रारम्भ भयो । २४ औँ फिल्मसम्म पनि नायिका अधिकारीले हिट फिल्म दिन नसकेको यर्थाथ छ । तर केकीको चर्चा भने कम भएको थिएन । एक पछि अर्काे चलचित्र फ्लप हुदै गएपनि निर्देशक तथा निर्माताको आँखामा केकी परिरहिन । तर नायिका अधिकारीले अभिनय गरेको चलचित्र छ माया छपक्कैले निकै राम्रो व्यापार गर्याे । मुख्य भूमिकामा रहेकी केकीलाई पनि फिल्मले हिट नायिकाको ...
गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई मायाको चिनो प्रदान गर्दै मनबहादुर पुन
सामाजिक सञ्जालमा नेपालीलाई लट्ठै पार्ने म्यानमारकी सुन्दरी
काठमाडौं । म्यानमारकी एक सुन्दरी अहिले नेपाली समुदायको विचमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको पात्र बनेकी छिन् । मंगोल वर्णकी यी सुन्दरीको मुहार नेपाली युवतिको जस्तै छ । कतिले त उनको तस्विर राखेर फेशबुकमा नयाँ एकाउन्ट पनि खोलेका छन् । खासमा उनी म्यानमारकी सुन्दरी हुन् । उनको वास्तविक नाम पन्चि सो नायुङ हो । उनको बुवा उ सो नायुङले मेपन्चिको नाम परिवर्तन गर्दै मेपन्चिमात्र राखे जस्तो वास्तविक अर्थ मिस पे...
हिउँमा पाइने चरा पेन्गुइनको संसार
पेन्गुइन हिउँमा पाइने चरा हो । यो जन्मेदेखि मर्दासम्म हिउँमाथि बस्छ । हिउँ नै यसको संसार हो । हिँउमाथि मानिसजस्तै दुई खुट्टाको सहाराले सीधा भएर हिँड्छ । हिउँमाथि हिँड्न र हिउँमुनिको पानी पौडन निकै माहिर यो चरा आफंैमा प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । पेन्गुइनका विभिन्न प्रजाति हुन्छन् । हालसम्म पत्ता लागेका पेन्गुइनका प्रजातिमा १८ थरिका रहेका छन् । यी प्रजाति अन्टार्कटिकादेखि भूमध्यरेखासम्म पाइएका छन् ।...
दशैँ–तिहारको विदामा घुम्ने हाे ? यी हुन घुमफिरका लागि उत्कृष्ट १२ गन्तव्य !
बर्षेनी लाखौँ विदेशी पर्यटकहरुलाई आतिथ्य सत्कार दिने नेपालीहरु विस्तारै आफू पनि आन्तरिक पर्यटक बनेर घुमफिरका लागि देशका विभिन्न रमणीय स्थानमा जान थालेका छन्। दशैँ–तिहारको समय बढी फुर्सदिलो समय हो। यही बेला मौसम पनि सफा बनेर प्रकृतिकलाई मनमोहक बनाइदिन्छ। त्यही भएर पनि दशैँको विदामा धेरै नेपाली घुमफिरमा निस्किन मन पराउँछन्। यो दशैँमा घुमफिरका लागि देशभित्रैका कुन कुन ठाउँ उपयुक्त हुन सक्छन्? नेपाल...
मन बहादुर पुनको उपन्यास भेडिखर्क प्रकाशित हुँदै !
प्रावती पुन नेपाली पाठकहरुको बिचमा पछिल्लो समय संस्मरणात्मक उपन्यासमा उडाउदै गरेका मन बहादुर पुन भेडिखर्क संस्मरणात्मक उपन्यासको प्रकाशनमा जुटेका छन । प्रकृति,मानब र पशुपंछिसँग लामो समय मध्यपश्मिका हिमाली क्षेत्रमा बसेर अध्यान गरेका पुनले भेडिगोठालेको जिवनमा आधारित उपन्यास तयार गरेका हुन । सरसरती उपन्यासको पाण्डुलिपि पहिलै पढन पाउदा आफुलाई भाग्यमानी सम्झेकी छु अन्ततः उपन्यास निक्योलमा पुग्छ, भौत...
कर्णालीका यी आर्कषक १० गन्तव्य, जहाँ सजिलै जान सकिन्छ
मन बहादुर पुन कर्णाली प्रदेश प्राकृति स्रोत साधनले धनी छ । नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनको हिसावले भर्जिन क्षेत्र हो । समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउन पहिलो र सजिलो विकल्प भनेको पर्यटननै हो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल राराजस्ता मनोरम प्राकृतिक स्थलहरूले कर्णाली भरिभराउ छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित पवित्र तीर्थस्थल कैलास मानसरोवरको प्रवेशद्वार कर्णाली प्रदेश नै हो । तर, धेरैलाई कर्णाली विकट र ...
फाेटाे फिचरः विश्वका धेरै सुन्दर र लोभलाग्दा ठाउँ
अनौठा किसिमका झरना, फूलका बगैँचा विभिन्न यस्ता ठाउँ छन् जसले पर्यटकको मान लोभ्याउँछ । विश्वमा धेरै सुन्दर र लोभलाग्दा ठाउँ छन् जहाँको सुन्दरता देखेर कोही पनि दङ्ग हुन्छ । 1.Black rock desert, America 2.Cano Cristales,Colombia 3. Jheel netroon, Tanzaniya 4. Ibaraki, Japan 5.Canola flower fields, Yunnan, China 6.Cinque Terre, Italy 7.The Lake Retba 8.Tulip fie...